Zimbabwe: Nhamoinesu Quits Warriors - allAfrica.com
Photo: Светлана Бекетова/Wikimedia
ZIMBABWE international defender, Costa Nhamoinesu has announced his retirement from international football ahead of the country's participation at the Africa Cup of Nations (AFCON) finals to be held from June 21 to July 19 in Egypt.
"Calling it a day at international level. Thank you God for the opportunity. Thank you Zimbabwe," the dreadlocked player said.
Nhamoinesu's retirement comes at a time Warriors coach Sunday Chidzambwa was reportedly considering selecting him in his squad for the AFCON finals, where Zimbabwe was drawn in Group A alongside the hosts Egypt, Uganda and Democratic Republic of Congo.
In fact Warriors team manager Wellington Mpandare told newzimbabwe.com in an interview that they were surprised with Nhamoinesu's decision to end his international career.
"We are obviously surprised that Costa has decided to retire from international football. He was definitely going to be considered for selection into the Warriors squad for the AFCON finals. "Costa did not participate in the qualifying campaign, but was still under consideration. He is playing regularly for his club," Mpandare said.
He was expected to return to the squad for the 2019 AFCON qualifiers, but didn't feature in all the matches after reportedly falling out with Chidzambwa for allegedly refusing to travel for the Cosafa Cup tournament in South Africa last year.
He was not called up to the national team since then, missing out on the team's successful 2019 AFCON qualifying campaign.